Isishayo sesiphepho iBiocomb - Kinne Maskinteknik AB
Ukushiswa kukaphethiloli okuqinile nokuguquguquka kwesishisi samafutha.
Kwi-Biocomb cyclone burner, uphethiloli oqinile uvutha amalangabi anjengalowo oshisa uwoyela. Ama-biocomb cyclone burners angabeka esikhundleni se-burners kawoyela ekufakweni okukhona. Ukuguqulwa kusuka ku-oyili kuye ku-petroli oqinile kwenzeka ngokuvimba isishisi lapho isishisi samafutha siye. Njengomuntu oshisa i-oyile, umshini wesivunguvungu ususetshenzise ngokuphelele ukuqalelwa futhi ayeke ukulandelana. Indawo elawulayo efinyelela ku-20% yamandla emakethe inikeza ukusebenza kwezomnotho nezimo. Isishayo sesishingishane singashiswa ngamafutha aqinile azo zonke izinhlobo, ngokwesibonelo, utshani, udwebu lwamapulangwe, izinkuni zokhuni kanye nokuphehlwa kanye nemfucuza yezolimo, yezimboni neyasendlini. Isidingo sokuthi uphethiloli usetshenziswe ukuthi kungenzeka ukuthi uthuthwa ngendlela enobungozi ongatholakala ngokuquma, ngokuchoboza noma ngokufaka impahla. Okunye ukulungisa amafutha kungenziwa njengengxenye yokuphathwa kwamafutha esitshalweni.
Ukushiswa kuqala ngamafutha. Ngemuva kwalokho uphethiloli oqinile ushaywa nge-tangentially egumbini lokuhlangana le-cylindrical. Ngesikhathi sokuhlangana, umlotha ubekwa ngemuva kwegumbi lokuhlangana, lapho umlondolo wokufaka umlotha ojikeleza ngokuqhubekayo usakaza umlotha usuka ezindongeni uye emgodini bese usuka lapho ngohlelo lokukhiya bese ususa isisefo esitsheni somlotha.
Uma nganoma yisiphi isizathu ugesi oqinile uphazamiseka, ukusebenza kwe-oyili kuvulwa ngokuzenzakalelayo ukuqinisekisa ukulethwa kwamandla kumthengi. Lokhu kuqinisekisa ukutholakala okuphezulu kakhulu. Isishisi sibonga kakhulu icwecwe lamandla aphezulu atholakala ngenhlanganisela yomoya / yamafutha enhle kakhulu. Lokhu, kanye nokulahlekelwa okuncane kokushisa emvelweni, kunikeza izinga lokushisa eliphakeme lokushisa kanye nokusebenza kahle kakhulu komlilo.
Ukwakhiwa okuqinile okunezingxenye ezimbalwa ezinyakazayo.
Isakhiwo nomsebenzi wesishayo
I-cyclone burner casing yenziwe ngensimbi. Ngaphakathi, igumbi lokuhlanganisa liyadingeka nge-ceramics, engutsheni yetshe ngamatshe nakulokho okuyi-gable kanye nokuphuma kuyo okune-cement mass ephansi. Izinga le-ceramics lihambisana nezimo ezibonakala lapho kushiswa uphethiloli ofanele.
Umoya we-combustion wenziwa ku-casing yangaphandle yesishisi futhi nenamba yomoya ilawulwa nge-dampers etholakala kuma-tangential inlets. Lokhu kuphumela ekushayweni komoya okuphezulu nokushuba okuqinile. Ukwakheka kwegumbi lokuvutha kunikeza umoya womlilo ukuhamba okujikelezayo okuya ngasekupheleni nangaphandle phakathi komshini wokushiswa.
I-biofuel yathuthwa ngokoqobo iye egumbini lokuhlangana. Ukufakwa kaphethiloli kubekwe ngendlela enobungozi futhi uphethiloli uphekelwa ngomuthi womlilo ngokujikeleza
ukunyakaza ubheke emaphethelweni ongemuva. Ukushintshana kusho ukuthi izinhlayiya zikaphethiloli zihlala zisemaphethelweni aze ahlanganiswe. Umthamo ulungile futhi uhlala ulingana nokugeleza komoya.
Ukuqala okuzenzakalelayo kwesishayo sesiphepho kwenzeka ngokuqala umshini wokucindezela i-burner ngamandla ka-70 kW nangemva kuka-5
imizuzu emuva-up iphampu kawoyela isiqalile, okuthi ngokulandelana kwandise amandla ku-50% wamandla alinganiselwe womshini. Ngemuva kweminye imizuzu emi-5 kawoyela oyisekela, okuphakelayo kwe-biofuel kuqalile. Ukugeleza kwe-biofuel kuyakhuphuka njengoba ukugeleza kwamafutha okusekela emuva kuncishiswa kuze kuphele ngokuphelele bese ukugeleza kwe-biofuel kulawulwa yimfuneko yamandla.
Ngesikhathi sokuvutha, umlotha ugcinwa ngokuqhubekayo ngemuva kwegumbi elishisayo. Ukusuka lapha, umlotha ugoqwa ngesikhuni esishintsha kancane, esakhiwe ngamanzi bese sithunyelwa emgodini ongaphansi. Ngohlelo lokukhiya, umlotha uwela kubhavu wamanzi. Ukusuka kulokhu, osebenza njengesicupho samanzi, umlotha uthuthwa ngesikulufu sokuhambisa esitsheni somlotha.
Idizayini eyingqayizivele yomnotho wamandla ongcono.
Ngokufanelekile, inhlanganisela yamathala kanye neyamafutha amancane "amancane", uhlobo lwe-biofuel lukhiqiza amagesi we-flue aqukethe i-carbon dioxide namanzi nge-ballast ye-nitrogen.
Ukuhlanganiswa kwama-biofuel, ngokungafani nomlilo we-fossil, akushintshi okuqukethwe kwekhabhoni dayoksi njengoba izitshalo zimunca isikhutha futhi zikhiphe umoya-mpilo ngesikhathi sazo sokukhula. Ukuvutha uqobo kuyinqubo eyinkimbinkimbi kakhulu yokuphendula okuningana okuqhubekayo okulawulwa yizimo zangaphandle nezangaphakathi.
Ngokubumbana, kuyizinhlayiyana zikawoyela ezigaba ezilandelayo; ukuhanjiswa kwezindawo eziguqukayo / ukuqina kwegesi nokuhlanganiswa kokugcina kwendawo eseleyo yekhabhoni. Okusho ukuthi, uphethiloli uguqulwa ube amagesi anokutsha aqhubekela phambili nomoya-mpilo ku-carbon dioxide namanzi. Lokhu kusabela kudinga isikhathi, izinga lokushisa kanye nokutholakala komoya-mpilo.
Ezisetshenzisweni zezobuchwepheshe, ingxenye ethile ye-carbon oxide kanye ne-hydrocarbon itholakala kumagesi we-flue. I-carbon monoxide kumagesi weflue ukulahleka, ngoba inamandla. I-carbon oxide ihlangana emoyeni ne-carbon dioxide emkhathini.
Ngaphezu kokuba wukulahleka, ama-hydrocarbon ayingozi kubantu. Ngokuvamile, lokhu kusebenza engxenyeni eyi-hydrocarbons eyi-organic eningi futhi ikakhulukazi eyiphunga elimnandi.
Ukushiswa kwe-biocomb kuhlinzeka nge-hydrocarbon engathandeki kanye namazinga amancane ekhabhoni dioksijini kumagesi weflue ngenxa yokushisa okuphezulu, umoya omuhle / inhlanganisela yomoya nesikhathi esanele sokuhlala.
Ukushisa komlilo kuncike enanini lokushisa kanye nokuqukethwe komswakama kaphethiloli, izinga lokushisa lomoya wokuhlanganisa nomoya wokweqile, futhi nenani lamandla asuswe elangabini ngemisebe nokwebiwa. I-Biocomb burner ifinyelela izinga lokushisa eliphakeme lokushisa ngokubonga komoya ophansi kanye nokulahleka okuncane.
Iqiniso lokuthi kune-nitrogen emoyeni futhi ngezinga elithile ekaphethiloli lenza ukuthi kube nokwakha nitrogen oxides. Izinga le-nitric oxide bonding lenyuka ngezinga lokushisa elikhulayo nangomoya owandayo. Okuqukethwe kweNitric oxide kukhuphuka nesikhathi esengeziwe sokuhlala. INitric oxide ikhohlisa ukufakwa kwenhlabathi acid kanye nokufa kwehlathi. Amazinga okushisa womlilo lapho eshisa ama-biofuel enomswakama ojwayelekile kungukuthi izinga lokuqalwa kwe-nitrogen oxide liphansi. Isishisa se-biocomb sinikeza ukukhipha okuphansi kwe-nitrogen oxide ngokubonga komoya ophansi owedlulele kanye nomoya omuhle / inhlanganisela yomoya. Isishiseli se-biocomb siphinde sinikeze nokukhishwa okungaphansi kwe-nitric oxide ngisho nangamafutha anikeza amazinga okushisa aphezulu wokubumbana ngenxa yithuba elilula lokungenisa ngempumelelo i-flue gesi kabusha.
Amafutha amaningi aqinile angasetjenziswa ekushisweni kweBiocomb. Isimo ukuthi usayizi wezinhlayiyana uvumela i-dosing eqhubekayo nokuthuthwa kwepneumatic. Ngokufaka i-notch noma i-crusher esitshalweni, lokhu kungahlangana nanoma yiluphi uhlobo lwamafutha. Esitsheni, izinhlobo ezahlukene zikaphethiloli zingasetshenziswa ngemuva kokuthi umthamo usushintshwe kalula kanti nezidingo zomoya zangempela zephethiloli zidluliselwa ohlelweni lokulawula.
Zonke izinhlobo zamafutha aqinile aqukethe umlotha. Izinga lokushisa lapho i-ash lakha i-slag lihlukile kunophethiloli futhi lingahle lincike ekutheni uphethiloli ukhule kuphi. Ukushiswa kweBiocomb akunangqondo kuzo zonke izinhlobo zomlotha. Iphinde ibe nesilinganiso sokuhlukaniswa komlotha kanye nengxenye ephansi kakhulu yokungashiswa emlotheni ohlukanisiwe. Inani elincane lomlotha elishiya i-burner njenge-umlotha wempukane ngokujwayelekile liqukethe lingashiswanga.
Ukuguqulwa nokufakwa okusha
Idizayini eyinkimbinkimbi yomshini we-biocomb, izinga layo eliphakeme lokuhlukaniswa komlotha kanye nomshini we-oyela ongathi ilangabi kukwenza kulungele ngokuphelele ukuguqula ama-boilers afaka i-oyela abe uphethiloli oqinile.
Ngokuhlinzeka ngengxenye yesembozo se-boiler ngama-turbulators, lokhu kunganikeza amandla okukhipha afanayo nangamafutha. Ngokufakwa okusha, ama-boilers ajwayelekile enzelwe ukushiswa kwamafutha angasetshenziswa, okuphumela ezindlekweni zokutshala imali ephansi.
I-automation nokulawula kuklanyelwe ngendlela yokuthi kutholakala ngendlela efanayo yokusha kwe-oyili. Ngaphezu kwalokho, lokhu kunikeza i-Biocomb burner ibanga lokulawula ukuya ku-20% wamandla we-brand. Inani elincane lamafutha aqukethwe ku-burner alidingi imishini yokushisa noma yokupholisa ngokushesha.
I-Biocomb burner inomklamo olula futhi omile onezingxenye ezimbalwa ezinyakazayo. Eminye imishini ekufakweni okuphelele ingezobuchwepheshe obwaziwa, obufakazelwe kahle, obunikeza uhlelo olulula noluthembekile ngezindleko eziphansi zokutshala nezokulungisa, ngenkathi ukuthembeka kokusebenza kuphezulu kakhulu. Amandla wokusebenzisa kalula izinhlobo ezahlukene zikaphethiloli ku-Biocomb burner kanye nezinye izinzuzo kunika isilinganiselo esisha sezindleko zokukhiqizwa kwamandla - umnotho wamandla ongcono.
Isishayo sesishingishane esizenzakalelayo esilungele uwoyela oqinile wazo zonke izinhlobo: utshani obunqunyiwe, utshani obuthunyelwe, ukuqinisekiswa okusanhlamvu, izicubu, isigayo, imidumba, ama-briquette, udoti, udoti.
Indaba ngemuva kwesishisi.
Indawo yesicelo sabashisi bezishingishane
I-Biocomb burner ebekwe ebhuthini elinezitezi ezintathu ezivuthayo zokukhiqiza amanzi ashisayo, amanzi ashisayo noma umusi.
I-Biocomb burner ifakwa egunjini lokuxubha ukuze kukhiqizwe amagesi weflue ashisayo ngezinhloso ezahlukahlukene zokuwoma.
I-Biocomb burner ebekwe kuflue gesi / i-air exchanger yokushisa noma ukomisa.